Salaad booy Hawiya iyo habargidir ma wataa mise ma wato ?
SomaliNet Forum (Archive): RA'YIGA DADWEYNAHA - Your Opinion: Somalia: Archive (Before Nov. 8, 2000): Salaad booy Hawiya iyo habargidir ma wataa mise ma wato ?
<!-Post: 118364-!><!-Time: 972910967-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Monday, October 30, 2000 - 03:02 am
<!-Text-!> Horta su aasha is weydiinta mudan waa salaad booy ma wataa Hawiye mise ma wato ?
hadii uu wato maxaa daliila ?
haduusan wadana maxaa iyanan daliila ?
sidoo kale Habargidir ma wadataa C/qaasim?
waxaan jeclaanlahaa in aan wada wadaagno inteena Hawiyaha ah arimahan ina quseeya hadaf qaadasho raacid iyo diidis ba dawaladan somalia inteeda kale way ku qasban tahay iney soo raacdo wixii aan anagu isku raacno oo waxaa nahay Majoritida dad weynaha iyo weliba quwada wadanka ka jirta heysatan maanta dhaqaale ,ciidan, tiknoolejiyo, hogaamin dhinac kaste leh laguna tiirsan yahay. <!-/Text-!>
<!-/Post: 118364-!> <!-Post: 118404-!><!-Time: 972915195-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Xiirey<!-/Name-!> Monday, October 30, 2000 - 04:13 am
<!-Text-!> Hawiye idinkaa ku khasban inaad Soomaali soo dhexgashaan ileen caqli iyo aqoon aad ku wada noolaataan ma lihidine.Hadaad leedihiina 10kii sano ee ina soo dhaafey baad isticmaalilahaydeen dameer fowqa dameer. <!-/Text-!>
<!-/Post: 118404-!> <!-Post: 121414-!><!-Time: 973240112-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Happy<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 10:28 pm
<!-Text-!> Shaqo la'aan ayaa kuheysa ee shaqo yeelo, maanta dawlada waxaa raacsan soomaali oo dhan intaan ka ahayn soomaali diid or so called land/land. Get the point. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121414-!> <!-Post: 121429-!><!-Time: 973244650-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Cadaado<!-/Name-!> Thursday, November 02, 2000 - 11:44 pm
<!-Text-!> Ujeeddo xume aan wanaag ujeedin baad tahahay oo doonaya inuu ummadda dib u heshiinta u diyaar garawday fidno dhex dhigo. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121429-!> <!-Post: 121436-!><!-Time: 973246336-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Friday, November 03, 2000 - 12:12 am
<!-Text-!> sual xume salad booy waa nin habargidir ah oo hadana soomaalia dhab ah,isagoo H/gidir ah cid uu xoog iyo xoolo uga baahanyahay ma jiro.HUSEIN,iyoATTO waa raacsanyihiin dawlada ee waxay u been guurayaan Afgadood iyo Cigaal. <!-/Text-!>
<!-/Post: 121436-!> <!-End-!>